Dowladda Soomaaliya oo cambaareysay howl galkii Faransiiska ka fuliyay Buulo Mareer – idalenews.com
Dowladda Soomaaliya ayaa cambaareysay howl galkii habeen hore Ciidamada Kumandoska Faransiiska ka fuliyeen deegaanka Buulo Mareer ee Gobolka Shabellaha Hoose, kaasoo ay doonayeen inay ku soo furtaan Muwaadin u dhashay Faransiiska oo 2009-kii lagu afduubtay Muqdisho.
Kulan deg deg ah oo ay xalay Golaha Wasiirada ku yeesheen magaalada Muqdisho, ayaa waxaa looga hadlay howl galkii fashilmay ee Faransiiska, iyadoo war ka soo baxay Golaha Wasiirada lagu muujiyay sida ay uga xun yihiin qasaaraha ka soo gaartay dad shacab ah.
Ra’iisul Wasaare kuxigeenka ahna Wasiirka Arrimaha dibada Fowsiyo Yuusuf Xaaji Aadan ayaa sheegtay in Xukuumada ay ka xun tahay weerarkii Buulo Mareer, isla markaana aysan raali ka aheyn weerarkii Faransiiska ka geystay deegaankaas.
Madaxweynaha Faransiiska Francois Hollande ayaa sheegay inuu bixiyay amarka ay Ciidamada Kumandoska ku qaadeen weerarkaas, inkastoo uu rajo xumo ka muujiyay in howl galkaas ku soo dhamaaday sidii aanay fileyn.
Inkastoo howl galkaas hadafkii laga lahaa aan laga gaarin, hadana waxaa jiray dad rayid ah oo ku geeriyooday, kaasoo ay ku jirtay haweeney umul aheyd.